Isu tinoongorora mutsauko uripo pakati pe iPhone 6 ne iPhone 7 mune ino vhidhiyo | IPhone nhau
iPhone 6 vs. iPhone 7: vhidhiyo kuongorora kwavo misiyano
Zvinoita kunge nezuro pandakaenda kuApple Store muRio Shopping na8 mangwanani mangwanani rimwe zuva munaGunyana 2014 kunotenga yangu itsva iPhone 6. Pandakanzwisisa kekutanga izvo Apple zvaida kutitaurira kuti iyi ndiyo yakanakisa iPhone. Parizvino. zuva racho. Chokwadi ndechekuti makore maviri apfuura kubva ipapo uye kuti isu tine iPhone nyowani. Chigadzirwa chisiri kure zvakanyanya kubva pane chakaratidzwa ipapo patinotaura nezve chikamu chemuviri, asi izvo zvinogadzira musiyano wakashata mune mamwe ese zvikamu.
Uye ndezvekuti kunyangwe zvinogona kutaridza kuti iyo iPhone 7 iri mhando ye "rehash" naApple, shanduko dzinogona kuwanikwa pamatanho ese, zvichiita iyi iPhone chishandiso chakazara kwazvo. Nhasi tinoona mutsauko wakakosha kwatiri, vashandisi.
1 Bhatani? kumba
2 Dhinda zvakaoma
3 Kunge pfuti
4 Nongedza uye pfura!
5 Ndokuona usambo, 16GB
Weird, weird, weird. Isu tese takabvumirana kekutanga patinoisa munwe pane bhatani idzva repamba re iPhone 7. Zvakaoma kutsanangura manzwiro ainoburitsa mushure memakore mazhinji kudaro ajaira "kubaya" kwemuviri. Asi kushamisika munzira yakanaka, sezvo iko kwekutanga kufungidzira kuchipera mumaawa mashoma chete, kuchinja materu uye kufefeterwa kwemamwe mamodheru zvinoita kunge kushamisa. Shanduko inodiwa kuti ukwanise kuvimbisa kuramba kwemvura IP67 iyo inozvitutumadza uye kuti, mukuwedzera, inoita zviratidzo senge multitasking nekukurumidza kuita.
Sezvazviri pachena, iPhone 7 inosanganisira yechipiri-chizvarwa Kubata ID, zvinoreva kuti kuvhura yedu iPhone nezvigunwe zvemunwe zvirokwazvo kunokurumidza kupfuura pane iyo iPhone 6.
Chimwe chezvinhu zvinoita kunge zvisingaite kana usina, asi izvo zvinoita mutsauko mukuru. Mumazuva angu ekutanga neiyo iPhone 7 kunzwa kuri "ndakamborarama sei ndisina 3D Kubata". Kuwedzeredzwa, asi kubudirira panguva imwe chete. Kubatanidzwa kweiyo 3D Kubata muhurongwa ikozvino kwazara kupfuura patakakwanisa kuyedza muma6s uye, pasina kupokana, icho chinhu chaunokoshesa kana iwe uchibva kune iyo iPhone 6.
RAM ndangariro ndechimwe chezvinhu izvo zvausingambofungi nezvazvo kana uine iPhone, nekuti iwe unofungidzira kuti ichasara pane chero chainacho mukati. Uye ichokwadi kusvika padanho. Kwete kuti iyo iPhone 6 "yakaipa" ine 1GB ye RAM, asi kuvhara mapurogiramu kumashure uye kurodha mitambo dzimwe nguva zvinogona kuodza moyo. Pane iyo iPhone 7 kanganwa nezve maapplication kudzoreredza pese paunobuda iwo, nekuti nekuda kweiyo 2 GB ye RAM iyo haizombove dambudziko zvakare. Iyo nyowani A10 fusion chip zvakare ine chikamu chakanaka chemhosva yekugadzira iyo iPhone 7 kunzwa kunge mota isingamiswe, kunyanya kana iwe uchibva kune iyo iPhone 6, nekuti izvi zvinokurumidza zvakapetwa seA8 yayo.
Nongedza uye pfura!
Iyo iPhones kamera haina kumbobvira yawana akanakisa marekodhi pabepa, asi yakagara iri pakati pezvakanakisa mumhedzisiro. Iine iyo iPhone 7 haina zvishoma uye, kunyangwe yekushandisa kwemazuva ese isu hatizoshamiswa nemusiyano uchienzaniswa ne6, kana iwe uchida kutora mifananidzo uye kutora mavhidhiyo ne iPhone yako, iwe uchaona mutsauko. Pakati pezvakakurumbira zvatinowana muchikamu chino sekusiyanisa maficha ndeaya: ma megapixels gumi nemaviri ekamberi kamera uye 12 yekumberi, zvichisiyana ne7 uye 8 megapixels e iPhone 1.2, zvichiteerana. Zvakare, uye ichi chinhu chatisingawani muiyo iPhone 6s, zvinosungirwa kutaura nezve optical image stabilizer, inosanganisirwa kekutanga mune 4,7-inch modhi.
Ndokuona usambo, 16GB
Iyo taboo yeApple mukati memakore aya, iyo 16GB yekuchengetera mune yepasi modhi yeterminal ayo, inonyangarika gore rino - yaive nguva - yekupa nzira ku32GB. Ikozvino hongu, iyo yekupinda modhi ichakwanisa kupindura kune hombe nhamba yevashandisi vasingazofanira kutenga modhi ine hukuru hunyanzvi hwekupedzisira kupedzisa hafu.
Chaizvoizvo nezve izvi, asi zvakare zvimwe zvimwe zvinhu zvatinokuudza iwe muye iPhone 7 ongororo, shanduko kubva ku iPhone 6 kusvika ku7 inoruramiswa. Izvo zvinopa zvakawanda, kunyange zvichiratidzika kunge zvakavigwa pakutanga kuona. Kuti hapana shanduko yakakura mukugadzirwa kwekunze hazvireve kuti hakuna kumbove mune zvimwe zvese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » iPhone 6 vs. iPhone 7: vhidhiyo kuongorora kwavo misiyano
Iyo iPhone 7 inoita senge yakatsvukuruka kwandiri kupfuura iyo iPhone 6 uye 6 plus uye avo S akasiyana akange atove, asi zvakare iri foni kuti chinhu chega chinogona kukuunzira iwe fluidity, nekuti haufanire kubatanidza mahedhifoni kana micro sd , kwete infrared, kwete miriyoni zvinhu kupfuura zvimwe zvishandiso zvinodhura zvakanyanya. Iyo hainawo kamera inomira kunze, inongoteerera asi wozotarisa izvo zvakakosha foni uye unoona yakajairwa vhezheni ye32 GB (ndine 32 magigs, ipfupi kwandiri) uye unoona kuti iyo inodhura mazana masere euros ... uye haugone kuramba zviri pachena, iyi telefono kubira kunotyisa, uye vamwe vateveri veapuro ndivo vanogona kuzviramba.
Pindura kune rafarodri04
Magirazi ekukudza akadaro
Zvakakosha kana iwe ukashandisa iyo iPhone kuita aerospace komputa, zvikasadaro zviri nani kugara ne6 uye ne € 800 pane iyo WhatsApp inoshanda zvakafanana!
"Nyika inonhuhwa kunge tsvina"
Vagadziri vanogona ikozvino kutenga kushambadza kubva kuApp Store
Samsung inotyisa inoenderera mberi: Galaxy Note 7 ye "inshuwarisi" inobata moto muChina